Aiza no hampiantranoako ny bilaogiko orinasa?
Aiza no hametrahako ny bilaogiko orinasa?
Alahady, Desambra 9, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny zoma, taorian'ny fihaonambem-paritra dia nisy tambajotra mahafinaritra ary nametraka fanontaniana maro aho.
Hanosika famelabelarana lava kokoa aho amin'ny manaraka, ary manantena ny hampifandraisina bebe kokoa - toa nisy fahalianana lehibe avy tamin'ireo orinasa teo an-toerana momba ny fomba ahafahan'ny tambajotra sosialy sy ny bilaogy manampy bebe kokoa ny orinasany.
Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra dia ny fampidirana bilaogy ao amin'ny tranokalan'ny bokikely misy anao. Avelao aloha aho hilaza fa tsy hanome sosokevitra ahy mihitsy fanoloana ny tranokalan'ny bokinao misy bilaogy - Mino aho fa misy herin'ny marika, marketing, ary fisian'ny tranonkala voalamina voajanahary.
Ny orinasa dia hahazo tombony amin'ny fampidirana bilaogy ataon'ny orinasa, na izany aza, raha mamela ny loharano (fotoana sy talenta) ary avelan'ny orinasa (mangarahara). Ny fanontaniana dia ny fomba tokony hampidirana bilaogy orinasa ao anaty tranokala orinasa.
Tokony hampiditra bilaogy ao amin'ny tranonkalako ve aho sa hampiantrano azy amin'ny toeran-kafa?
Ambany ambany: Ny fampidirana bilaogy ao amin'ny tranonkalanao dia mitaky ny fihazonana ny fahamendrehana amin'ny marika orinasa. Tsy midika izany hoe tsy afaka mivazivazy ianao na manoratra mangarahara… midika fotsiny izany fa hampifandraisin'ny olona bebe kokoa amin'ny orinasanao ny olona fa tsy amin'ny mpiasa manoratra azy.
Ny fanoratana amin'ny fianakaviana, fivavahana, na politika na fandrehitra (manoratra ratsy) amin'ny lohahevitra manokana dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fomba fahitana ny orinasanao. Mila mampiasa fahamalinana amin'ny famoahana lahatsoratra ianao mba hiarovana ny orinasanao na ny marikao.
Raha samy mitokana ny bilaoginao dia marika manokana izy io ary afaka manome fahalalahana fanampiny amin'ny fanoratana. Tsy hoteneniko ianao hisafidy iray amin'ny iray hafa - miankina aminao ny zavatra tianao ambara amin'ny besinimaro. Miaraka amin'ny bilaogin'orinasa dia mila manohy manontany tena ianao hoe: “Ity ve no hafatra iriko hifandraisan'ny orinasanay?”
Misy tombotsoan'ny motera fikarohana sy ny tombotsoan'ny mpampiasa traikefa amin'ny fisarahana mazava tsara ny bilaoginao ao anaty tranokalan'ny orinasanao. Ny mpanjifa sy ny vinavina dia manomboka mianatra amin'ny bilaogy orinasa ary mitady azy ireo.
Raha mikaroka ny "Company Name Blog" ianao, ho vokany ve ny bilaoginao? Bilaogin'ny mpiasa iray? Mpanjifa tsy faly? Andramo dia zahao! Ity dia valin'ny fikarohana tokony hanananao (ary afaka mora).
Ahoana no fomba hampidirako bilaogy ao amin'ny tranokalan'ny orinasako?
Ny fomba tsotra indrindra hananganana bilaogin'ny orinasanao raha ampifandraisina amin'ny orinasanao dia ny fitadiavana azy amin'ny zana-kazo subdomain na subdirectory. Ny fisongadinan'ny “bilaogy” ao amin'ny URL dia hiantoka ny fanondroana azy tsara amin'ny Search Engine:
Izany hoe, araraoty ny bilaogin'ny orinasanao ao amin'ny pejin-tranonkalanao! Tsy haneho kisendrasendra ireo lahatsoratra bilaogy ao amin'ny pejin-tranonao aho fa kosa hampiseho rohy, sombiny voasoratra ary sarin'ny mpanoratra miharihary eo amin'ny pejy fandraisana ao anatin'ny faritra misy azy manokana rehefa voasoratra ireo lahatsoratra.
Ny motera fikarohana dia tsy hanasazy anao (atiny duplicate) noho ny sombiny iray - fa mety hahazo tombony amin'ny fanovana atiny tsy tapaka ao amin'ny pejy fandraisana ianao.
Fanamarihana: ny fanampiana ny sarinao dia tokony ho takiana amin'ny bilaogy rehetra. Manome sary mazava tsara fa ity dia atiny nosoratan'olona iray fa tsy soratana tamin'ny alàlan'ny doka fanontana ara-barotra na fifandraisam-bahoaka. Oh… ary azafady mba alao antoka fa TSY vita amin'ny alàlan'ny doka fanontana ara-barotra na fifandraisam-bahoaka izany - tsy hisy olona hihaino anao rehefa manao izany.
Azonao atao ny mampiditra vahaolana maimaimpoana maimaimpoana toa WordPress (Linux) na an Fitorahana bilaogy ASP.NET vahaolana ho an'ny lahatahiry 'bilaogy' azy manokana sy ny tahiry amin'ny tranokalanao, fa tazomy ny fomba tsy misy tohika amin'ny alàlan'ny lohahevitra manokana mampiditra ny fomban'ny tranonkalanao.
Raha orinasanao lehibe kokoa dia mety te hitady ianao a vahaolana momba ny bilaogy orinasa hitantanana atiny sy handamina azy araka ny tokony ho izy fahitana miaraka amin'ny motera fikarohana.
Mamaky bebe kokoa amin'ny Blaogin'ny orinasa:
Fa maninona no bilaogy? Fa maninona no tsy forum?
Common fanontaniana sy valiny amin'ny bilaogy orinasa.
Fanatanterahana a Paikady momba ny bilaogy orinasa.
Tags: bilaogylahatahiry bilaogysubdomain blogfitorahana bilaogyorinasa bilaogybilaogy orinasa
Thor Schrock manenjika ireo Gurus amin'ny marketing amin'ny Internet? Manome vola $ 1,800 amin'ny vola sy loka
Hery mijanona: Haharitra hafiriana ianao?
Dec 10, 2007 amin'ny 11: 12 AM
Lahatsoratra tsara manazava ny fomba fampitana ny elanelana amin'ireo tranokala mankany amin'ny bilaogy. Faly mihaona aminao amin'ny MBO Event!
Dec 10, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Manana fanontaniana be dia be avy amin'ny orinasa samihafa aho momba ny fampidirana bilaogy amin'ny tranokalan'ny orinasa, maro amin'izy ireo no miahiahy momba izay tokony hosoratany.
Soraty daholo! Mety hahafinaritra mihitsy aza ny bilaogy orinasa… afaka mametraka sary mahatsikaiky avy any amin'ny birao, mpifosafosa, vazivazy sns.
Topazo maso amin'ny bilaogy YouTube dia ho hitanao fa mandefa ny zava-drehetra izy ireo (na ny fampahalalana izay tsy mifandraika amin'ny YouTube aza).
Dec 15, 2007 amin'ny 9: 04 AM
Olana ho an'ny orinasa maro io fanapahan-kevitra io. Miasa amin'ny orinasa mpanonta lehibe aho izay tena manandanja tokoa ny marika ary ny atiny fanonta no zava-drehetra. Ny sombin-dahatsoratra fanonta rehetra dia mila adika ary ekena ary noho izany dia sarotra ny nanaiky ny toetoetran'ny bilaogy. izahay te bilaogy mitambatra, saingy niadana ny fananganana zaza noho ireo olana momba ny marika ireo ary vokany dia bilaogy tsy mitambatra vitsivitsy ihany no noforonina. Mampalahelo izany.